> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka MMC (Warbaahinta Card)
MMC, gaaban kaarka multimedia, waa flash adke qalab lagu kaydiyo digital fudud. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa si loo badbaadiyo photos, music, videos ama faylasha kale document, oo caadi ahaan loo isticmaalo ee telefoonada gacanta. Waa hagaag, haddii wixii xog ah ee kaarka MMC tan badiyay? Waxaan soo kaban karaa files waxaa ka mid ah sida uu ka soo kabsaday kaarka xasuusta caadi ah? Haddii aad kala kulantay taasi, ha ka welwelin. Waxaad xaqiiqo ah karto!
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada xogta MMC ah?
Dhab ahaantii, waa shaqo fudud in la sameeyo dib u soo kabashada card MMC ah. Waxa aad u baahan tahay waa barnaamij soo kabashada MMC. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso Mac ah.
No arrinta photos, videos, files audio, ama nooc kale oo ka mid ah dokumentiyada aad laga badiyay, taas software kabashada MMC kaa caawin karaan in ay dib ula 3 tallaabo u helaan. Halkan aynu wada isku day barnaamijka version Windows.
Marka ay maamulaan barnaamijka on your computer, waxaad heli doontaa interface ee soo socda. Connect card MMC si aad u computer iyo raac saaxir ah in ay ku talaabsato.
Step1. Dooro nooca file in aad rabto in aad ka soo kabsado card MMC aad.
Step2. Dooro kaarka MMC (qalabka saari External).
Step3. Sahlo baaritaan qoto dheer, haddii aad MMC ayaa formatted. Haddii aan, waxay gudub iyo sii.
Step4. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo jeeg inuu ka soo kabsado faylasha aad rabto.
Marka kabsado files, kuma badbaadin kaarka MMC asalka ah, laakiin on your computer, ka fiirsaneysa inay ammaanka xogta.
Sida loo dayactir iPhone Camera Roll shil oo Photo Loss